पौष १० गते शनिवार – यस्तो छ तपाईको भाग्य ? आफ्नो राशिफल हेर्नुहोस् « Gaunbeshi
पौष १० गते शनिवार – यस्तो छ तपाईको भाग्य ? आफ्नो राशिफल हेर्नुहोस्
मेषः सुखद समाचार सुनेर दिनको सुरुवात हुनेछ । मध्यान्हबाट तपाईको दिन सुखद हुनेछ । पहिले बोलेको कुरा पुर्‍याउन नसक्दा सहकर्मी तथा आफन्तबाट तपाईको आलोचना हुनेछ । परिवारका साथ मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुरेपनि खानपानको तालमेल नमिल्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । प्रेममा केहि असन्तुष्टि मिलाउदै बढ्न सकिनेछ । व्यापारमा मन्दी आउनेछ । साझपख प्रविधिको प्रयोग मार्फत अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ ।
मीनः तपाईले गरिरहेको ब्यवसायमा फाइदा हुँदै जानेछ । विवादित विषयहरु हल भएर जानेछन् भने न्यायिक निर्णयहरु तपाईँकै पक्षमा आउनेछ । अध्ययन अध्यापनमा मन जाने हुनाले अरुभन्दा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सकिनेछ । मन परेको मानिससँग छोटो तथा रमाईलो यात्राको तय गर्न सकिने तथा स्वादिष्ट भोजनमा रमाउँन सकिनेछ । साझपख आफन्तसँग मन मुटाब बढ्न सक्छ ध्यान दिनु होला ।